Sharon Myorr Myor | Buzzy
နည်းပညာ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ သင်ဘယ်လောက်ထိ ရူးသွပ်နေပြီလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးမယ့် ပုံရိပ်များ(၃)
မည်သည့်အရာမဆို တန်ဆေးလွန်ဘေးပါပဲ ... နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သင့်ရူးသွပ်စွဲလမ်းမှုက အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသလို အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေတာကို သရော်ရေးသားဖော်ပြတဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုပုံရိပ်တွေကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် ခံစားမိမှာပါ
16 Mar, 01:22 AM
ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ မသတီဖွယ်အကောင်းဆုံး ထိတ်လန့်ဖွယ်အကောင်းဆုံး အစားအစာ (၁၆) မျိုး
လူတွေဟာ စွန့်စားပြီး ထူးထူးခြားခြား စားသောက်ကြတတ်ကြပါတယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူမျိုးပေါင်း များစွာရဲ့ အစားအသောက်ပေါ်ယူဆချက်ချင်း ကွဲပြားနေပါတယ် ။ ဒီထဲမှ မသတီစဖွယ်၊ထိတ့်လန့်ဖွယ် (၁၆) မျိုးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် ။
9 Mar, 08:59 AM
နည်းပညာ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ သင်ဘယ်လောက်ထိ ရူးသွပ်နေပြီလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးမယ့် ပုံရိပ်များ(၂)
9 Mar, 05:53 AM
နည်းပညာ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ သင်ဘယ်လောက်ထိ ရူးသွပ်နေပြီလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးမယ့် ပုံရိပ်များ
စစ်ဘေးသင့် မြို့ပျက်ကြီးမှာ မင်္ဂလာဆောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲ
လက်ရှိ အသက်ရှင်ရခြင်းဘ၀ဟာ သေခြင်းထက် ပိုပြီး အင်းအားကြီးတယ် လို့ပြောတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတစ်တွဲရဲ့အခြားသူတွေနဲ့ မတူတဲ့ခံယူချက် လုပ်ဆောင်ချက်က အရမ်းကို ထူးခြားပါတယ် ။
12 Feb, 01:00 AM
ချစ်သူများနေ့မှာ သင့်ချစ်သူက သင့်ကို ဘယ်ခေါ်သွားမလဲဆိုတာ သိချင်ပါသလား
ချစ်သူရည်းစားရှိသူများ ကိုယ့်ချစ်သူက ချစ်သူများနေ့မှာ ကိုယ့်ကိုဘယ်ခေါ်သွားမလဲဆိုတာ မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေဆိုပြီး ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ် ။ ပျော်စရာ ကောင်းမှာပါ :)
8 Feb, 06:29 PM
ဘယ်​သူ​ပြောလဲ ? .... အဝလွန်​ရင်​ မလှဘူးလို့ :-)
ဝဝတုတ်​တုတ်​​ပေမယ့်​ သူမပညာ​တော့ အလွန်​ထူးခြား လှပတဲ့ စိန်​​ခေါ်မှုပါပဲ ... ဝတယ်​ဆိုပြီး စိတ်​ဓာတ်​မကျသင့်​ပါဘူး
8 Feb, 12:15 AM
ဒါလေးကြည့်ပြီးရင် သင်မျက်ရည်ဆယ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး
သမီးလေးအတွက် အစစအရာရာ အဆင်ပြေချင်ယောင်ဆောင်ရတာ လိမ်လည်နေရတဲ့အဖေတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပင်ပန်းသလဲ ... အရမ်းသနားစရာကောင်းပါတယ် ။
7 Feb, 09:11 PM
ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး အကျဉ်းထောင်တွေ အကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ် ။
သင်​သာ ငှက်​တစ်​​ကောင်​ ဖြစ်​ခဲ့မယ်​ဆိုရင်​ ကမ္ဘာကြီးကို ​မြင်​​တွေ့ရမယ့်​ပုံ သဏ္ဌာန်ဟာ အရမ်းဆန်းကြယ်​ပါတယ်​
သင်​သာ ​ကောင်းကင်​ထက်​မှာ ဝဲပျံ​နေရတဲ့ ငှက်​တစ်​​ကောင်​ ဖြစ်​ခဲ့မယ်​ဆိုရင်​ သင်​မြင်​ရမယ့် ကမ္ဘာ​မြေဟာ ဘယ်​လို ပုံစံ ဖြစ်​​နေမလဲ ? ကမ္ဘာ့ နိုင်​ငံအသီးသီးက နာမည်​ကြီးမြို့များ ​တည်နေရာ (၄၀)ကို အဲဒီမြင်​ကွင်းနဲ့ ​ဖော်​ပြထားပါတယ် အဲ့သြဖွယ်​ပါပဲ
24 Jan, 03:10 PM
၂ရက်​အရွယ်​က​လေးငယ် အသက်​​အငယ်​ဆုံး ​ကျောက်​ကပ်​အလှူရှင်​ဖြစ်​လာ
တရုတ်​နိုင်​ငံ Hunan မှာ ​မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ၂ရက်​သား က​လေးငယ်​က ​​ကျောက်​ကပ်​လှူဒါန်းခဲ့​ကြောင်း သိရပါတယ်​။
16 Jan, 04:52 AM
သင့်​အရင်​ဘဝဟာ ဘယ်​သူဖြစ်​ခဲ့တယ်​ဆိုတာ ​အောက်​မှာေ​ဖော်​ပြထားတဲ့ ပုံ​တွေကို ဆန်းစစ်​​ရွေးချယ်​ပြီး သိရှိနိုင်​ပါတယ်​ ။
15 Jan, 04:56 PM
အသက်​ ၂၀၀ ပြည့်​သွားတဲ့ Stethoscope :-)
၁၃.၁.၂၀၁၆ မှာ သက်​တမ်း၂၀၀ ပြည့်​သွားတဲ့ လူနာစမ်းသပ်​စစ်​​ဆေးတဲ့ နားကြပ်​က​လေး Stethoscope အ​ကြောင်း သင်​သိပါသလား ။ ဘယ်​သူက ဘယ်​လိုပုံ ဘယ်​ခုနှစ်​က တီထွင်​ခဲ့သလဲ ။
13 Jan, 03:42 PM
သုံးနှစ်​အရွယ်​ မိန်းက​လေးကို အဖွားအိုကြီးအဖြစ်​ မြင်​​တွေ့ရမှာပါ ။ ဘယ်​လိုဖြစ်​လို့ပါလိမ့်​ ။
11 Jan, 04:01 PM
အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ခံစားချက်မျိုး အဖြစ်အပျက်မျိုး လူတိုင်းနီးပါ ခံစားဖူးကြပါတယ် ။ အရပ်အခေါ် ထမင်းလုံးတစ္ဆေစီးခံရခြင်း (၀ါ) အိပ်ပျော်နေစဉ် သွတ်ချာပါဒလို ခံစားရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။အမျိုးအစား၊လက္ခဏာနဲ့ကုသနိုင်ပုံကိုဖော်ပြထားပါတယ် ။
11 Jan, 01:26 PM